१ वर्षको कोठा भाडा बोकेर लामा पुगे अर्चनाको डेरामा, आफ्नै छोरी सम्झेर भाबुक भए सहयोगीहरु (हेर्नुस भिडियो) -
१ वर्षको कोठा भाडा बोकेर लामा पुगे अर्चनाको डेरामा, आफ्नै छोरी सम्झेर भाबुक भए सहयोगीहरु (हेर्नुस भिडियो)
एउटी अबोध कलिली बालिकाले कमाएर घरपरिवार पाल्छिन् भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर बास्तबमै ९ वर्षीय बालिकाले आफ्नो आमा बचाउन काम गर्दै र आफु पनि पढ्दैछिन् । यति सानै उमेरमा आफ्नो आमाको लागि यति धेरै दुख गरि बसन्तपुर क्षेत्रमा पानि बेच्ने काम गर्छिन् अर्चना पराजुली । उनि अहिले कक्षा ३ मा पढ़छिन । पढाईमा पनि एकदम मेहनेती छिन । उनि कक्षाको तेस्रो छात्र हुन् ।
बाबा मिर्गौला रोगकै कारण केही महिना अघी बिते र आमा पनि मुटु र मिर्गौलाकै बिरामी छिन् । आमालाई मुटु र मृगौलाको समस्या भएकै कारण आमा काम गर्न नसक्ने भएका कारण उनि उपचार खर्च जुटाउन पानी बेच्न थालेकी हुन् । उनकी दिदि पनि छिन् । दिदिले भने आमाको हेरचाह गर्छिन् ।
गरिब भएकै कारण आफुहरुलाई साथीहरुले पनि हेप्ने गरेको उनि बताउछिन । हामीले पहिलो भिडियो युट्युबमा हालेपछी केहि रकम जम्मा भएका थिए आज हामीले तेही रकम दिन जादा परिवारको सबै जना खुशी भएका थिए ।
अहिले अर्चनाको परिवारलाई सहयोग गर्नेको लर्को नै लागेको छ । धेरैले उनीहरुलाई सहयोग गरि रहेको छ । उनीहरुलाई १ बर्षसम्मको कोठा भाडा समेत अमेरिका बस्ने सोनाम थुन्दुप शेर्पाले सहयोग गरेको छ ।
त्यसैगरि ललितपुर निवासी अनिल भण्डारीले चामल सहितको थुप्रै समानहरु सहयोग गरेको छ ।
यति धेरै सहयोग पाउदा अर्चनाको परिवारमा केहि भए पनि खुशियाली छाएको हामीले महशुस गरेका छौ । तपाई हरु पनि हामी मार्फत सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने 9861296721 सम्पर्क गर्नु होला । र तपाई सिधै अर्चनाको आमालाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ उहालाई 9865543220 मा सम्पर्क गर्नु होला ।
बाकी भिडियोमा हेर्नुस
एक बाख्राले गर्यो यस्तो चमत्कार, थाहाँ पाउँदा स्थानीयको उ’ड्यो हो’स् !
बाङ्गेमुढामा पाँचसय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला परेपछी स्थानीय दङ्ग !
घोडाघोडीमा निर्माण सम्पन्न भनिएको सडक अधुरै रहेपछि..
प्रतितोला २ सय रुपैयाँ बढ्यो सुनको मूल्य